Oti mkpu na Elekere Ultra, ngwa mkpu kachasị mma na nke zuru oke maka gam akporo | Akụkọ akụrụngwa
Mmanya na-egbu egbu | | android, Aplicaciones, software
Na-adịbeghị anya, anyị na e si mesoo a ọnụ ọgụgụ dị mma nke ngwa ọgaranya mkpu functionalities maka android, dị ka nrọ ahụ iHome, Pipeup mkpu olu na echi. Agbanyeghị, mgbe a bịara na ọnụ ọgụgụ nke njirimara na ogo nke ịhazi, ọ nweghị nke dị n'elu ọbụlagoro nso na ntinye dị jụụ, Oti mkpu Elekere Ultra.
Ultra mkpu elekere Ejiri ihe dị mma, gụnyere mkpuchi dị iche iche a na-ahụkarị, isiokwu na-adọta anya, ọtụtụ wijetị ụlọ (na-anọchi anya oge dị ugbu a na mkpu maka ọtụtụ eserese ndị na-esote), oge iji nwee ụra ngwa ngwa (PAN), ebe elekere nkwụsị na oge, oge elekere arụ ọrụ iji nyere nne gị aka ịkwadebe akwa sie ike nke ike siri ike, nhọrọ iji mechie / kwụsị mkpu ahụ na idozi nsogbu mgbakọ na mwepụ, igwu egwuregwu ma ọ bụ naanị ịkwanye ngwaọrụ ahụ, na ọtụtụ ndị ọzọ. Nkọwa iji soro mgbe ezumike.
Ngwa UI bụ n'ezie njirimara nke ngwugwu niile. Ọ bụghị naanị na ọ na-enye ọtụtụ swiit anya, ọ nwekwara ọtụtụ atụmatụ enyere n'okpuru ngụkọta nke isi isii (6). Malite na aka ekpe (na-eche na ị na-ejide ngwaọrụ ahụ na nhazi ihu), bọtịnụ mbụ sitere na ebe ị nwere ike ịlele ụbọchị na oge ugbu a, gbanwee ọnọdụ ehihie na abalị, ma lelee ọnọdụ batrị dị ugbu a site na nifty batrị egosi.
Pịa bọtịnụ mgbịrịgba, ọ ga-ewega gị na ihuenyo mkpuchi dị mkpa nke ngwa ahụ, site na ebe ị nwere ike ijikwa mkpu gị dị iche iche. Enwere ike ịhazi mkpu ọ bụla n'otu n'otu n'ụzọ na-enweghị ngwụcha. Dịka ọmụmaatụ, a na-enye gị nhọrọ iji gosipụta nkeji oge mkpuchi maka mkpu. Nwere ike ịtọ ngwa ahụ ka ị kpọọ ụda mkpu na-enweghị usoro, họrọ otu n'ime usoro nhazi ụda nke ụda ma ọ bụ kọwaa faịlụ MP3 ọdịnala site na ọbá akwụkwọ gị maka ebumnuche a. Nhọrọ ndị ọzọ gụnyere mkpado na mkpu jijiji nke ọ bụla na-enye ohere. Site n’otu ihuenyo ahụ, ị ​​nwere ike ịlele nhọrọ ahụ ji nwayọ na-arịwanye elu, yana ịkọwa ogologo oge dị elu maka mmụba a, teta n'ụda dị jụụ karịa mkpọtụ iwe.
Mgbe ahụ, nhọrọ ahụ akọwapụtara mmegharị dị iche iche iji kpochapụ / tie mkpu. N'echiche a, ị nwere ike ịhọrọ ịnye obere ngwaọrụ gị, dozie nsogbu mgbakọ na mwepụ ma ọ bụ kpọọ egwuregwu egwuregwu mgbagwoju anya iji mezuo nzube ahụ. Si snooze ọnọdụ n'ọnọdụ, ị nwere ike ịtọ omenala mkpu oge dị ka nke ọma dị ka ọnụ ọgụgụ kasị elu nke ihe omume ịra nro nwere ike na-tapped.
Malite na nsogbu nke mgbakọ na mwepụ, ngwa ahụ na-enye gị ohere ịkọwapụta ọnụ ọgụgụ nke nsogbu ị ga-eweta iji mechie mkpu. Enwere ike ịtọ ntọala nsogbu maka nsogbu ndị a ka ọ dị nfe, ọkara ma ọ bụ sie ike. Nhọrọ ikpeazụ na mkpuchi mkpu dị ezigbo mkpa, kwa, ebe ọ na - enye gị ohere ịhazi omume mkpu mgbe ị nọ na oku. Ọzọkwa, enwere nhọrọ iji gbanwee gaa na-egwu egwu mgbe ngwaọrụ nọ na ọnọdụ ịgbachi nkịtị. Ntọala niile edepụtara n’elu ga-ezu iji nyere gị aka ịhazigharị mkpu maka ya.
Tochọrọ iburu ụra ọsọ ọsọ na-enweghị ike hazie ntọala mkpu niile sara mbara? Pịa bọtịnụ Zzzzz na isi interface nke ngwa ahụ, họrọ otu n'ime usoro atọrọ egwu anọ dịnụ (15, 30, 60 ma ọ bụ 120 nkeji) wee pịa bọtịnụ ngwa ngwa ihi ụra iji nwee ọ naụ ike. Igodo nke anọ na isi interface nke ngwa ahụ na-enye gị ohere ịmalite elekere nkwụsị ma ọ bụ ngụ oge, ebe bọtịnụ nke ise sitere na ebe ị nwere ike ịkọ oge dị iche iche na ntọala dị iche iche iji kwadebe nsen dị nro. Na nke a, ị nwere ike ịhọrọ oke nke akwa ahụ, ụdị akwa ị ga-achọ ịnwe, ma ozugbo edochara ihe niile, pịa bọtịnụ mmalite oge ma chere ka mkpu ahụ daa.
Igodo ikpeazụ na interface ngwa ngwa na-enye gị ohere ịkọwa mmasị dị iche iche nke ngwa. You nwere ike ịhọrọ isiokwu ndabere nke ngwa ahụ, setịpụ uche maka ịgbachi nkịtị / kwụsị mkpu ahụ, mee ka ọnọdụ ezumike ahụ kwụsị (iji kwụsị ụda niile na otu oge), wee hụ ọkwa mkpuchi na-esote na mpaghara ngosi, n'etiti ndị ọzọ.
You na-eche ugbua na inwere otutu ihe banyere itinye 'oti mkpu'? Ọfọn, nke dị n'elu bụ atụmatụ ndị dị na ụdị mgbasa ozi akwadoro nke Ultra mkpu. E nwere ụdị dollar atọ a kwụrụ ụgwọ dị na ụlọ ahịa ahụ Kpọọ GoogleNakwa, ọ bụghị naanị na-egbu mgbasa ozi, ọ na-ewetakwa ụda nke atụmatụ ndị ọzọ, gụnyere ozi ihu igwe ewuru na wijetịIleba anya na mgbasa ozi mgbasa ozi gị n'abalị na-eri oge ị tetere, ihe ngosi Ultra Sleep nke na-enyere gị aka ihi ụra ma teta na ọnọdụ dị jụụ na nke dị mma, yana ọtụtụ ụda olu egwu dị ụtọ iji gbasaa ọdọ mmiri ị họọrọ.
Ozi ndi ozo - (Onye mebere ubochi: Igwe onyonyo oku maka iphone na iPod Touch)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Oti mkpu na Elekere Ultra, ihe kachasị mma na ngwa mkpuchi zuru oke maka gam akporo